बडी सेमिङको प्रतिशोधमा STAR बनेकी सम्झना बुढाथोकी शरीरकै कारण हराइन – Kavrepati
Home / Uncategorized / बडी सेमिङको प्रतिशोधमा STAR बनेकी सम्झना बुढाथोकी शरीरकै कारण हराइन
बडी सेमिङको प्रतिशोधमा STAR बनेकी सम्झना बुढाथोकी शरीरकै कारण हराइन
admin June 28, 2021	Uncategorized Leaveacomment 144 Views
काठमाडौं : काठमाडौंमै जन्मिएकी सम्झना बुढाथोकी सानैदेखि चञ्‍चल स्वभावकी थिइन्। नाच्‍न भनेपछि हुरूक्कै हुन्थिन्। सानैदेखि आमाको साडी लगाउन मनपर्थ्यो उन लाई। मेकअप गर्न, ऐना हेरेर नाच्‍न रूचाउने उनी आफू लाई सानोमा सबैले नक्कली भन्‍ने गरेको सम्झन्छिन्।
सानैदेखि नाच्‍न मन पराउने सम्झना बुढा थोकीले विस्तारै यसै क्षेत्रतिर पाइला सारिन्। उनले विभिन्‍न गीतमा कोरस नृत्य गर्न थालिन्। उनको रूचि यही क्षेत्रमा देखेर उनलाई चिने जानेका मानिसले टीभी सिरियलमा काम गर्ने अफर गरे। उनले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘चेतना’ नामको टेलि सिरियलमा समेत काम गरिन्।
उनको अभिनयलाई सबैले मन पराए। त्यही बेलातिर उनले सिउँदोको सिन्दुर, नौ डाँडा पारी लगायतका फिल्ममा मुख्य भूमिकामा अभिनय पनि गरिन्। फिल्ममा ‘साइन’ गराउन निर्माता निर्देशकको लर्को थियो। उनले आठदेखि नौ वटा फिल्ममा सम्झौता पनि गरेकी थिइन्। तर, उनको जिन्दगीमा एउटा दुःखद् घटना घट्यो।
त्यो दिन स्टेजमा नाच्‍ने कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम निकै सफल भयो। रातको ९ बजेतिर बल्ल कार्यक्रमस्थलबाट घर जाने समय भयो। उनका गुरूसमेत रहेका जगत गुरुङले बाइकमा घर छाडिदिने भए।
बाइकमा बस्दा विपरीत दिसाबाट आइरहेको कारले हान्यो। महाराजगञ्जको चोकनेर भएको दुर्घटनाको उनलाई केही याद छैन। उनले भनिन्, ‘कति सम्झने कोसिस गर्छु तर, सम्झन सक्दिन।’ उनले त्यो कार्यक्रमभर के-के गरेको भन्‍ने पनि भुलेको बताइन्। ‘साथीहरूले त्यो दिन यस्तो गरेकी थिइस्, उस्तो गरेकी थिइस् भन्छन् तर मलाई याद छैन,’ उनले भनिन्।
होस आउँदा उनी सानो बालकजस्तै बनेकी थिइन्। बोलीसमेत तोते थियो। ‘नेपाली फिल्म क्षेत्रका सम्पूर्ण कलाकारले अस्पतालमा आएर सहयोग गरेका थिए रे, तर मलाई केही याद छैन,’ उनले भनिन्। उनी १६ दिनजति कोमामासमेत पुगिन्। यसबाट मूक्त हुन उनलाई वर्षौं लाग्यो।
सम्झना पूर्णरूपमा स्वस्थ हुँदा, शरीर पहिलेजस्तो दुब्लो थिएन। शरीरका विभिन्‍न भागमा बोसोले साम्राज्य जमाएको थियो। उनी १०० केजीभन्दा माथिको तौलमा पुगेकी थिइन्।
सानैदेखि नाच्‍न भनेपछि हुरुक्क हुने सम्झनाले शरीर मोटो हुँदा पनि हिम्मत हारिनन्। उनी विभिन्‍न कार्यक्रममा पुगेर नाच्‍न थालिन्। विस्तारै मानिसहरूले मोटो शरीर लिएर पनि हल्का तरिकाले नाच्‍ने भनेर चिन्‍न थाले।
उनको अनुहारको भावभंगी, चालढाल र नृत्यलाई सबैले मन पराए। तर, उनको शरीरलाई कसैले सजिलो रूपमा स्वीकार्न सकेन। उनले सुन्‍ने गरेरै मानिसहरू ‘सबै राम्रो, तर शरीरचाहिँ अलि भएन’ भन्‍ने प्रतिक्रिया दिन्थे।
आफ्नै फिल्डका केही महिला साथीहरूले समेत उनको शरीरलाई लिएर नमिठो प्रतिक्रिया दिन्थे। यस्ता प्रतिक्रियाले उनलाई नमिठोसँग चिमोट्थ्यो। सम्झनाले भनिन्, ‘त्यो समयमा उमेर थियो, आत्मवल थियो, आएका नराम्रा कमेन्टले ऊर्जा दियो।’ त्यही ऊर्जा प्रयोग गरेर शरीर घटाउने अभियानमा लागिन्।
अहिले उनी रेन्टल बुटिक चलाउँछिन्। उनको बुटिकमा सुटिङका लागि चाहिने कपडा भाडामा पाइन्छ। आफू पर्दा अगाडि नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट मनोरञ्जनकै क्षेत्रमा रहेको उनको ठम्याइ छ।
उनले त्यो बेलाको दैनिकी सम्झँदै भनिन्, ‘म बिहान ४ बजे उठेर १० बजेसम्म निरन्तर व्यायम गर्थें। छ महिना जति खाना पूर्णरूपमा बन्द गरें। काँक्रो खाँदा पनि पेट ठूलो होला भनेर डर लाग्थ्यो। उनी कडा ‘डाइट’ गरिरहेका बेला प्रहरीमासमेत कार्यरत थिइन्। त्यो समयबारे उनले भनिन्, ‘नूनिलो खान मनलाग्दा नून चाटेर समेत बसेकी छु।’
यही कडा मेहनतले उनी छ महिनामा ४९ किलोमा झर्न सफल भइन्। उनी दुब्लो भइन्, म्युजिक भिडियोको अफर आउन थाल्यो। मोडल शंकर बीसीले सुपारी चाम्रो बोलको लोकदोहोरी गीतमा अफर दिए। त्यहीँबाट उनले लालुपाते नुग्यो भुँइतिर, नआउ है सानु पधेंरीमा लगायतका चर्चित म्युजिक भिडियोमा काम गरिन्।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा उनको चर्चा दिनदिनै बढ्दै गयो। उनले भनिन्, ‘दुइटा डुंगामा खुट्टा राख्दा दुर्घटनामा परिएला भनेर मैले एउटा रोज्नुपर्ने थियो। कि नृत्य, कि पुलिस फोर्स। उनले पुलिस फोर्स त्यागिन् र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अँगालिन्।
मोडल शंकर बीसी र उनलाई रिलको सुपरहिट जोडी मानेर सबैले माया गरे। यी दुई जोडीको माग नेपाली लोकदोहोरी गीतमा सबैभन्दा उच्च थियो। म्युजिक भिडियोमा चर्चा कमाएको छोटो समयमै फेरि सम्झना हराइन्। लामो समयपछि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा झुल्किएपछि उनको खोजी हुनथाल्यो।
भाँचिएला जस्तो शरीर भएकी सम्झना अहिले देखिँदा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएकी थिइन्। स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारण आफू पुनः मोटोपनाको शिकार बन्‍नुपरेको उनको भनाइ छ। उनको अनुहार हेरेर फ्यानले चिन्दैनन्, तर हँसाइ र गालामा भएको कोठीले अनुमान लगाउँछन्।
लामो समयपछि उनले केही म्युजिक भिडियोमा काम गरे पनि दर्शकको नजरमा भने परेकी छैनन्। गरेका कामले खासै चर्चा नकमाएपछि अफर कम आउने र आफू पनि सुहाउँदो भूमिकामा मात्रै देखिन रूचाउने भएकाले काम कम भएको उनको भनाइ छ। ‘आफू यति भारी छु, भाँचिएला जस्तो केटोसँग भिडियो खेल्ने अफर आउँदा कसरी स्वीकार गर्नु?,’ सम्झनाले भनिन्। – स्रोत : नेपाल लाइभ
Previous भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यमा २५ सिट माथिका सार्वजनिक बस मात्र चल्न पाउने , के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ? यस्ता छन अबको नियमहरु
Next गरिब जनतालाई खाना खुवाउँदै गर्दा पु’लिस’को कु’ट’पिट’बाट अभियन्ता सपना रोका बि’होस ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
मीना ढकाल, उनको उमेर सायद ४५ को हाराहारीको हुँदो हो। तर उनको चुरीफुरी १६ वर्षे …